Khatarta farogelinta uu Abiy Ahmed ku hayo Soomaaliya - Caasimada Online
Home Maqaalo Khatarta farogelinta uu Abiy Ahmed ku hayo Soomaaliya
Khatarta farogelinta uu Abiy Ahmed ku hayo Soomaaliya
Sida aad la socotaan ama Fiidyowgan hoos ku dhegan uu tilmaamayo waxaa xilliggii Tigreegu ka talinayay Itoobiya ay Kenya iyo Itoobiya ku heshiiyeen inay u qaybsadaan Soomaaliya sida hoos ku cad:
1- In Jubbooyinka ay qaadato Kenya
2- In Soomaaliya inteeda kale ay qaadato Itoobiya
Sababtaas awgeed, waxay Itoobiya iyo Kenya ka codsadeen Golaha Ammaanka ee Jumciyadda Quruumaha ka dhaxaysa in ciidamadooda lagu daro AMISOM waana loo aqbalay si dhulka Soomaaliya xoog loogu boobo. Waxaa dalka jooga ciidamo Itoobiyaan ah oo aan ka tirsanayn AMISOM si ay u fuliyaan qorshahaas dhagaraysan. Immikana waxaa sarkaal Itoobiyaan ah loo magacaabay jago sare ee ciidamada AMISOM si uu qorshaha qabsashada Soomaaliya u hirgesho.
Haddii aan degdeg looga hortagin Laguna qasbin Itoobiya iyo Kenya inay dalka Soomaaliya degdeg ugala baxaan dhammaan codamadooda waxay Soomaaliya wajahaysa khatar weyn. Soomaaliya waxaa cadaawad dhuleed oo taariikhi ah kala dhaxaysa Itoobiya iyo Kenya oo labaduba gumaysta dhul iyo dad Somaliyeed oo ay hore u boobeen. Si ay dhulkaas u xalaalaystaan oo looga hadho ayay ku heshiiyeen inay kala qaybsadaan oo qabsadaan dhulka Soomaaliya. Sababtaas awgeed, khaladweyn ayay ahayd in Golaha Ammaanka ciidamada Itoobiya iyo Kenya u oggolaado inay soo galaan Soomaaliya.
Inta Golaha Ammaanka la weydiisanayo in laga saarayo Soomaaliya ciidamada Itoobiya iyo Kenya waan in dhaqdhaqaaqooda lala socdaa siiba ciidamada Itoobiya. Itoobiya oo dagaal sockeye burburiyay marna lagama aqbalayo in dhul Soomaaliyeed ama dekedo Somaliyeed ay xoogto oo qabsato. Dhammaan madaxda Soomaaliyeed ee gacanta ku siinaysa Itoobiya iyo Kenya inay kala qaybsadaan oo qabsadaan Soomaaliya waa in khiyaamo qaran lagu qaado mustaqbalka.